OSI Model (OSI7Layer) အပိုင်း (၁)
Network ပေါ်မှာ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံး Data အပြန်အလှန်
ပေးပို့နေပုံ ကို မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်ပေမယ့် ISO ( International Standard Organization ) မှ Developed လုပ်ထားတဲ့ Network model တစ်ခု လိုက်နာအသုံးပြုပြီး communicate လုပ်ကြပါတယ် ။ ၄င်း Network model ကို OSI ( Open System Interconnection ) လို့ ခေါ်ပါတယ် ။ OSI model ကို Layer7ခု ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်7Layer လို့လည်း ခေါ်ပါတယ် ။ OSI model ကို 1977 တွင် ISO မှစတင်ပြီး Developed လုပ်ခဲ့ ကြပါတယ် ။OSI model သည် TCP/IP တို့လို့ protocol မျိုးမဟုတ်ပါဘူး ။ လိုက်နာပြီး လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားတဲ့ Network model တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ် ။ protocol တွေကို ဖန်တီးမယ့် programmer တွေဟာလဲ OSI model အောက်မှာ အကျုံးဝင်အောင် ရေးသားကြပါတယ် ။အဲဒီလို OSI model ကို လိုက်နာ ပြီး ပုံစံထုတ်ရေးသားထားတဲ့ Protocol တွေသားလျှင် အခြား network တွေနှင့် ချိတ်ဆက် တဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲ မရှိ မှာဖြစ်ပါတယ် ။ထို့ကြောင့် TCP/IP အပါဝင် network protocol တော်တော်များများသည် OSI ဘောင်အတွင်းဝင်အောင် ရေးသားထားကြပါတယ် ။ အောက်ပါပုံတွင် computer တစ်လုံး မှအခြားကွန်ပျူတာ တစ်လုံးသို့ Data flow သွားရာလမ်းကြောင်းကို OSI model ဖြင့်ဖော်ပြထားပါတယ် ။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ သလို ကွန်ပျုတာ နှစ်လုံး Data ဖလှယ် မယ်ဆိုရင် Source လိုခေါ်တဲ့ Data ပေးပို့မယ် computer ရဲ့ application layer မှ စပြီး physical layer ထိ ဆင်းတစ်ဆင့်ချင်းဆင်းသွား ပါလိမ့်မယ် ။ ၄င်း physical layer မှ Data တွေကို cable ပေါ် သို့ transmit လုပ်ပါတယ် ။ ထိုမှတစ်ဖန် Data လက်ခံမယ့် စက် (destination ) သို့ ရောက်တဲ့ အခါ physical layer မှ စပြီး တစ်ဆင့် ချင်းတက်ပြီး နောက်ဆုံး application layer သို့ရောက်ရှိပါတယ် ။
(1)Application Layer Application Layer သည် OSI model ရဲ့ အပေါ်ဆုံး အလွှာဖြစ်ပြီuးser နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေရတဲ့ Layer လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောစရာ ရှိတာက Appilcation Layer ဆို တော့ photoshop တို့ word တို့ excel တို့အလုပ်တဲ့ Layer လားလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ် ။ Application Layer ထဲ မှာ အဲဒီsoftware application တွေမပါပါဘူး ။ Network နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ services တွေ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါ အသုံးပြုတဲ့ application protocol တွေအလုပ်လုပ်တဲ့ Layer ဖြစ်ပါတယ် ။ တစ်နည်းပြောရ ရင် Network နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ services တွေကို ထမ်းဆောင်တဲ့ Layer လည်းဖြစ်ပါတယ် ။ Application Layer မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ protocol တွေကတော့ HTTP (Hypertext Transfer Protocol ) , FTP (FileTransfer protocol ) , SMTP (Simple Mail Transfer Protocol ) , .......စတဲ့ protocol တွေအလုပ်လုပ်ကြပါတယ် ။ (2)Presentation Layer Presentation Layer ဟာ OSI ရဲ့ ၆ ခုမြောက်အလွှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ persertation layer က ဘာအလုပ်လုပ်သလဲ ဆိုတော့ presentation ,compression, encryption ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ၃ ခုကို အဓိက လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။တစ်ဖက်ကပို့လိုက်တဲ့ data ကို တစ်ဖက်က လက်ခံမယ့်သူဘက်မှ process လုပ်နိုင်အောင် transalator အဖြစ်နဲ့ လုပ်ပေးတာဟာ presentation layer ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ပါဘဲ ။ ဘာကို transalate လုပ်ပေးလဲ ဆိုရင် အခုလက်ရှိအသုံးပြု နေကြတဲ့ ကွန်ပျုတာတော်တော် များများရဲ့ language code တွေသည် ASCII (American StandardCode for Information Interchange ) ကို အသုံးပြုပါတယ် ။ ASCII language code သည် 1 charator ကို 8 bit နဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် IBM Mainframe လို တစ်ချို့ ကွန်ပျုတာ တွေမှာတော့ EBCDIC ( Extended Binary Coded Decimal Interchange Code ) ဆိုတဲ့ language code ကို သုံးကြပါတယ် ။ EBCDIC code ကတော့က 1 charator ကို7bit နဲ့ အလုပ် လုပ်ပါတယ် ။ အဲဒီ Language code မတူတဲ့ Computer အချင်းချင်း data ဖလှယ်မယ်ဆိုရင် ASCII မှ EBCDIC သို့ EBCDIC မှ ASCII သို့ အပြန်အလှန် Translate လုပ်ပေးပါတယ် ။Compression ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကတော့ ရှင်းပါတယ် ။ Network ထဲမှာ Data ပို့ ရင် အရွယ်အစား ငယ် သွားအောင် ချုံပေးပြီး(compression ) တစ်ဖက် က data လက်ခံ မယ့် ဘက်ရောက် တော့ uncompress ပြန်လုပ်ပေးပါတယ် ။Encryption ကတော့ ကိုယ့်ပို့ လိုက်တဲ့ data တွေကို secure ဖြစ်အောင် Encrypt (စကားဝှက်)လုပ်ပြီး ပို့ပါတယ် ။ တစ်ဖက် က ပြန်လက်ခံ ရင် Dencrypt ပြန်လုပ်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ် ။
(3)Session Layer Session Layer ကတော့ အလွယ်ပြောရင် connection တည်ဆောက်ပေးတဲ့ layer ဖြစ်ပါတယ် ။ Network ပေါ်မှာ Computer နှစ်လုံး Data ဖလှယ် မယ်ဆိုရင် အဲဒီ computer နှစ်လုံး ကြားမှာ connection တစ်ခု ရလာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် ကို session layer က လုပ်ဆောင်ပါတယ် ။ Connection ရသွားပြီဆိုရင်လဲ Simplex , half duplex နှင့် full duplex ဆိုတဲ့ mode သုံး mode ထဲက ဘယ် mode ကို အသုံးပြု ပြီး connection တည်ဆောက်မလဲ ဆိုတာ ကို ဆုံးဖြတ်ပေးပါတယ် ။အဲဒီ လုပ်ငန်းစဉ် ကို dialog control လိ်ုခေါ်ပါတယ် ။ ဥပမာ File တွေကိုအသုံးပြု ရန် File Server ကို Client က လှမ်းချိတ် တဲ့ အခါ File Server မှာ ရှိတဲ့ Session Layer Protocol တွေနဲ့ client computer မှာ ရှိတဲ့ session layer protocol တို့ အချင်းချင်း ညှိနိူင်း ပြီး Connection တစ်ခု တည်ဆောက်ပေးပါတယ် ။ အဲဒီလို တည်ဆောက်ထားတဲ့ connection ဟာအကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် Disconnect ဖြစ်သွားတယ် ဆိုရင်လည်း session layer protocol က သိရှိပြီး ထပ်မံချိတ်ဆက် ဖို့ ကြိုးစားပါတယ် ။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် အတိုင်းအတာ ထိအောင် File Server ကို လှမ်းချိတ်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုရင်တော့ session ကို ပိတ်ပစ်ပြီး error အနေဖြင့်ကြောင်းကြားပေးပါတယ် ။(ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်)
Bad Sector ဆိုတာ ဘာလဲ ။ Bad Sector ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ။ Bad Sector ဖြစ်လာရင်လာလုပ်မလဲ 6:52 PM
Bad Sector ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ်ကို တစ်ချို့လဲကြားဖူးရင်ကြားဖူးမယ် တစ်ချို့လဲစိမ်းနေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ် ကြားဖူးသည်ဖြစ်စေ မကြားဖူးသည်ဖြစ်စေ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုသူတိုင်း မလွဲမသွေ
ကြုံတွေ့ရမယ် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် ဒီပိုဒ့်လေးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ် ။
Bad Sector ဆိုတာဘာလဲ ?
Bad Sector ဆိုတာ Hard Disk ရဲ့ Data သိမ်းဆည်းတဲ့
မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဖတ်၍မရတော့သောအ၀န်းအ၀ိုင်း (ဧရိယာ)များကို Bad Sector လို့ခေါ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ Data တွေ ၊ information တွေဟာ
၄င်း Bad Sector ပေါ်မှာကျရောက်နေပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီ Data တွေကိုပြန်ခေါ်ဖို့ Recover လုပ်ဖို့ခဲယဉ်းပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Bad Sector ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲ ?
Bad Sector ဘာကြောင့်ဖြစ်ရသလဲဆိုရင်
- Hard Disk အပူချိန် မြင့်တက်လာခြင်း
- Voltage မတည်မငြိမ် ဖြစ်ခြင်း
- Hard Disk ကိုယ်တိုင်ကိုက အချိန်ကြာလာခြင်း
- Head Crash ဖြစ်ခြင်း စသည့်အကြောင်းများ ကြောင့် Bad Sector
Bad Sector ဖြစ်ရင်ဘယ်လို လက္ခဏာ တွေပြလဲ ? Bad Sector ဖြစ်ရင်ဘယ်လို လက္ခဏာတွေပြသလဲ ဆိုရင် - Hard Disk ရဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်နှေးလာခြင်း
- ဖိုင်တစ်ခုခေါ်ဖို့ ၊ Window တက်ဖို့ ကြာလာခြင်း
- တစ်ခါတစ်ရံ Window စအတက် Window Loading လုပ်တဲ့နေရာရောက်ရင် Restart ပြန်ဖြစ်သွား
လိုက် ပြန်တက်လာလိုက် ဖြစ်ခြင်း
- Hard Disk လုံးဝ မတက်တော့တဲ့အထိဖြစ်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုရင် Bad Sector စစဖြစ်ခြင်းဆိုရင်တော့ Scandisk ကို Autofix နှင့်ှSurface ကိုပါ Run ပေးရပါမယ် ။
အဲဒါဆိုရင် Bad Sector ပေါ်က Data တွေကို တစ်ခြားနေရာသွားထားပေးပါတယ်။
အဲဒီ Bad Sector ရှိတဲ့ နေရာကို လည်းအမှတ်အသားလုပ်လိုက်ပြီး နောက်ထက် Data တွေမသိမ်းနိုင်အောင်လုပ်ထားလိုက်ပါတယ် ။ (မှတ်ချက် ။ ။ Bad Sector ကြောင့်တော်တော်အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ အချိန်မျိုးကျမှ ဒီ Scandisk တို့ Chkdsk တို့ကို မ Runသင့်ပါ ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ Run လိုက်ရင် Hard Disk ထဲက Data တွေကို Recovery လုပ်လို့မရတော့တာမျိုး
ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ? Bad Sector ကြောင့်တော်တော် အခြေအနေဆိုးနေတဲ့ အခါမျိုးဆိုရင်တော
့ Hard Disk Generator Tool လို Software မျိုးကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ နောက်တစ်နည်းက တော့ Hard disk ကို Low Level Fomat ရိုက်ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Hard disk မျက်နှာပြင်ပေါ်က Bad Sector တွေကို ကော်ပတ် နဲ့စားလိုက်သ
လိုမျိုးလုပ်ဆောင်ပါတယ် ။ Hard disk တစ်လုံးကို Low Level Fomat (၃) ကြိမ်ဘဲ ရိုက်လို့ရပါတယ် ။
( မှတ်ချက် ။ ။ Low Level Fomat ကတော့ နောက်ဆုံးဆင့်လို့
ပြောလို့ရပါတယ် ။ Fomat ရိုက်နေရင်နဲ့ လဲပျက်ဆီးသွားနိုင်သလို ပြန်ကောင်းလာတာမျိုးလဲရှိပါတယ် ။
Ubuntu တွင် Google Earth 6.2 ကို အသုံးပြုချင်ရင်
Google Earth ကို ubuntu တွင် install လုပ်ချင်ရင်
Terminal ထဲမှာ အောက်ပါ command များကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ ။
Step : (1) sudo apt-get update
Step : (2) sudo apt-get install lsb-core msttcorefonts Step : (3) wget -O google-earth-stable_current_i386.deb http://goo.gl/iZT7r
ဒီနေရာမှာ နည်းနည်း ကြာနိုင်ပါတယ် ။ သူက Google Earth
ကို download လုပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ connection အပေါ် မူတည်တာပေါ့ ။
Step : (4) sudo dpkg -i google-earth-stable_current_i386.deb
ပြီးသွားရင် computer ကို restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ ။
ပြန်တက်လာရင် start bar မှာ Application > Internet > မှာ Google Earth
ဆိုပြီး ရောက်နေပါလိမ့်မယ် ။
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါပြောပြချင်တာကတော့ windows7 မှာ file server ပြုလုပ်နည်းပါ ။
step: (1) control panel ထဲက program and feature ထဲ
အဲဒီမှာ ဘောင်ခတ်ပြထားတဲ့ထဲကို ၀င်လိုက်ပါ ။အောက်ကပုံပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ။
အဲဒီမှာကျွန်တော် ဘောင်နဲ့ ပြထားတဲ့ check box တွေကို on ပေးရမှာပါ ။ ပြီးရင်တော့ ok ပေါ့ ။ install လုပ်နေပါလိမ့်မယ် ခဏ စောင့်လိုက်ပါ ။ပြီးရင်
step :(2) control panel ထဲက Administrative Tool ထဲက
ဆိုတဲ့ ထဲကိုဝင်ပေးပါ ။ အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရပါမယ် ။
အပေါ်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း tree လေးတွေကို ဖြည့်ချလိုက်ပါ ။
ပြီးရင် Site ဆိုတဲ့ပေါ်မှာ Right Click နှိပ်ပြီး
Add FTP Site ဆိုတာကို ရွေးပေးပါ ။
အဲဒီမှာ FTP site name ကတော့ FTP name ပါ ။ကြိုက်တာပေးလို့ရပါတယ် ။
Physical path မှာ တော့ ကိုယ် share ချင်တဲ့ folder
လမ်းကြောင်းကို ရွေးပေးရပါမယ် ။
ပြီးရင်တော့ Next ပေါ့ ။ အောက်ပုံပေါ်လာပါမယ် ။
IP Address မှာ ကိုယ် စက်ရဲ့ IP ကို ရွေးပေးပါ ။ Port ကတော့
ပြင်စရာ မလိုပါဘူး ။
SSL မှာ No SSL ကို ရွေးပေးပါ ။ ပြီးရင် Next ပါ ။
အဲဒီမှာလဲ ကျွန်တော်ပုံမှာ ဘောင်ခတ်ပြထားတဲ့ အတိုင်း ရွေးပေးပါ ။
special user name မှာ ကိုယ်စက် ရဲ့ user name ကို
ထည့်ပေးရမှာပါ ။အဲဒီ account နဲ့ ftp ကို ၀င်ရမှာပါ ။
မှတ်ချက် ။ ။ computer မှာ နောက်ထက် user account တွေ ထက်ဆောက်ပြီး
special user မှာ Roll ထက် Add လို့ရပါတယ် ။
Step: (3) ဒါဆိုရင် ftp configure လုပ်တာပြီးသွားပါပြီး ။
ကျွန်တော်တို့ firewall ကို ပိတ်ပေးရပါမယ် control panel ထဲ က firewall ထဲကို ၀င်ပေးပါ။
ဘောင်ခတ်ပြထားတဲ့ ပေါ်မှာ နှိပ်ပါ ။
ပုံမှာ ပြထားတဲ့ အတိုင်း FTP Server မှာ check box တွေ ရွေးပေးပါ ။
ပြီးသွားရင် control panel ထဲက firewall ထဲက
Turn Window firewall on or off ကို နှိပ်ပါ ။
Turn off windows firewall ကို ရွေးပေးပါ ။
ဒါဆိုရင် file server အသုံးပြုလို့ရပါပြီး ။
ftp server ကို သုံးမယ် ဆိုရင် ၀င်သုံးချင်တဲ့ စက်က browser မှ
server ip နဲ့ လှမ်းခေါ်ရပါမယ်
e.g ftp://192.168.1.83 (ip နေရာမှာ ftp server ip ထည့်ရပါမယ် )။
အပေါ်ပုံအတိုင်း user name နဲ့ password တောင်းရင်အဆင်ပြေပါ ပြီး ။
Ubuntu တွင် cisco packet tracer ထည့်သွင်းခြင်း 12:33 AM
ဒါကတော့ network သမားများအတွက်ပါ ။ ပထမဦးဆုံး PacketTracer533_i386_installer-deb.bin ကို အောက်က link မှာ down လိုက်ပါ ။
downပြီးသွားရင် download ဆိုတဲ့ အခန်းထဲမှာ PacketTracer533_i386_installer-deb.bin ဆိုတဲ့ bin ဖိုင်လေးရောက်နေပါမယ်။ အဲဒါလေးကို Desktop ပေါ် copy ကူးတင်လိုက်ပါ ။ ပြီးရင် Terminal ကို သွားပြီး အောက်က command များကို ရိုက်ထည့်ပေးပါ ။ ပုံနှင့်လည်း ပြထားပါတယ် ။
$ sudo chmod +x PacketTracer533_i386_installer-deb.bin
password ရိုက်ပေးပါ ။
$ ./ PacketTracer533_i386_installer-deb.bin
အဲဒီမှာ Do you accept the terms of this EULA (Y) yes / (N) no ဆိုတာပေါ်လာရင်
y ကို နှိပ်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ ။
Application > Internet > Cisco Packet Tracer ထည့်ကို ရောက်နေပါလိမ့်မယ် ။
Linux Desktop ပေါ်က drive တွေဖြုတ်ချင်ရင်
linux မှာ drive တွေကို ဖွင့်တိုင်း Desktop ပေါ်မှာပေါ်နေတက်ပါတယ် ။ Drive တွေပေါ်နေတော့ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုရင် ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူး ။ မျက်စိရူပ်လို့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့
(1) Terminal မှာ gconf-editor လို့ရိုက်ပေးပါ ။
(2) အောက်ပါပုံ အတိုင်းပေါ်လာရင်
apps ကို ဖြန့်ချလိုက်ပါ ။
အဲဒီမှာ nautilus အောက်က desktop ထဲ ကိုဝင်ပြီး volume_visible ကို အမှန်ခြစ်တပ်ထားရင် ဖြုတ်လိုက်ပါ ။
အဲဒီထဲမှာပဲ computer icon တို့ network icon တို့ ဖြုတ်လို့ ထည့်လို့ရပါတယ် ။